Iziphesheli ezihamba phambili ze-Advance ngoLwesihlanu Olumnyama: Izaphulelo Ezingakholeki | Izindaba zamagajethi
Izipesheli ezinhle kakhulu zakuqala ngoLwesihlanu oMnyama
Ulwesihlanu olumnyama Sekudlulile, njengoba wazi kahle, uBlack Friday ugujwa ngoLwesihlanu lokugcina lukaNovemba. Kodwa-ke, okunikezwayo kuya ngokuba ngcono futhi kungcono, futhi kulokhu iBlack Friday ingena ijule kakhulu ngempelasonto nangaphambi kosuku lweCyber ​​Monday.
Sifuna ukukubonisa ukuthi yiziphi izipesheli ezinhle kakhulu zempelasonto ye-Black Friday ukuze ugcine futhi ujabulele ubuchwepheshe ngentengo engcono kakhulu. Yingakho sesihlanganise izaphulelo ezinhle kakhulu ozothola kulo Mgqibelo nangeSonto ngaphambi nje kweCyber ​​Monday ukuze ungaphuthelwa yilutho.
1 Imikhiqizo yomsindo
2 Izipesheli eSitolo seHuawei
4 Abaqaphi bazo zonke izinhlobo
5 Amagajethi amahle kakhulu
Njengoba wazi kahle, sinokuningi esikunikezayo ebangeni le-Echo ngenkathi izinto zihlala, kuqala ngesizukulwane sesine i-Echo Dot.
Isizukulwane sesine i-Amazon Echo nayo ijoyina lezi zinhlobo zezaphulelo. Sinomsindo weDolby Atmos kanye ne-Zigbee protocol yokulawula yonke imikhiqizo yakho yasekhaya ehlakaniphile nexhunyiwe. Ukunikezwa kuleli cala ukuthi kusuka ekubizeni i-99,99 euro yenani elijwayelekile kuye kuma-euro angama-69,99 okunikezwayo.
Siyaqhubeka nomkhiqizo esiwuhlaziye lapha, amahedfoni weCambridge Audio TWS anikeze imiphumela emihle kakhulu kubasebenzisi. Sikhuluma ngeMelomania 1, lawa mahedfoni ane amahora ayisishiyagalolunye ukudlala okuqhubekayo, futhi 36 Okuningi ngecala lokushaja elifakiwe: Amahedfoni weCambridge Audio's Melomania 1 ahlinzeka ngengoma efanelekile isikhathi esingaphezu kosuku.
Sithole isaphulelo sama-euro ayishumi kulo mkhiqizo obashiya kuma-euro angama-10, intengo eqine kakhulu kunaleyo evame ukuba nayo, ngakho-ke singasebenzisa leli thuba.
Thenga manje IMelomanía 1 ngama-euro angu-79,99 kuphela (LINK)
Sihamba nezinye izindaba ezivelele, kulokhu sizokhuluma manje ngokugcina. Le Black Friday yisikhathi esihle ikakhulukazi sokubamba i-SSD hard drive. Lezi zinkumbulo ezintsha eziqinile ziletha isivinini esithe xaxa futhi unganikeza ukuthinta okwengeziwe kwejubane ku-PC yakho, okungukuthi, indlela esheshayo futhi eshibhile yokwenza iPC yakho ibonge ngokushesha kuBlack Friday, Ngikushiya okunye kokunikezwa okuvelele kakhulu:
I-1TB SanDisk Extreme enesaphulelo esingu-56% (130 €)> LINK
I-Samsung 970 Evo Plus evela ku-1TB enesaphulelo esingu-43% (€ 84,99)> LINK
I-Western Digital SN550 500GB ngesaphulelo esingu-30% (54,90)> LINK
Unezinye izindlela eziphathekayo, ama-hard drive asebenza kanzima we-SSD futhi nakanjani ama-hard drive e-SSD aklanyelwe ukukhulisa intengo.
Abaqaphi bazo zonke izinhlobo
Abaqaphi nabo banesaphulelo esimangazayo, ikakhulukazi uma ucabanga ukuthi ukusebenza ngocingo kungukuhleleka kosuku. Ngaleso sizathu nokunye okuningi, ukuthola umqaphi omuhle ku-Black Friday kuyindlela ejabulisa kakhulu, ake sibheke:
ISamsun 32 ″ 4K qapha ngama-euro angama-279,99 kuphela> LINK
Umqaphi ogobile we-Samsung 32 ″ 2K ku-144 Hz ngama-euro angama-299,99 kuphela> ENALCE
Ukuqapha kwe-HP 24 with ngesisombululo esingu-2K ngama-euro ayi-159,00 kuphela> LINK
Ukuqapha kwe-ASUS 27 with ngesisombululo se-HD ephelele ku-75Hz ngama-euro ayi-119,00 kuphela> B0845NMZ6K
Sikunikeze zonke izinhlobo zezinye izindlela, unabaqaphi abanezindleko eziphansi nabakhulu ekuxazululeni okugcwele, kanye nabaqaphi abasebenza kahle bobabili ukudlala kanye nokusebenza ezinqumweni ezivelele. Kuzoya ngezidingo zakho, kepha ukuqapha okuhle kwe-4K kuhle lokhu ngoLwesihlanu Olumnyama.
Amagajethi amahle kakhulu
Manje sihamba nezesekeli ezijwayelekile, sizokhuluma ngalezo zinhlobo zemikhiqizo ehlala ibukeka kahle edeskini lakho futhi engenza impilo yakho ibe lula:
Iphakethe lekhibhodi ye-Trust "Taro" negundane ngentengo emangalisayo ye- € 12,99 kuphela kulokhu LINK (28% isaphulelo). Ungaba nekhibhodi yezinombolo okulula ukuyisebenzisa negundane ukuze usebenze ngentengo ehlekisayo.
Amagundane e-Logitech, ahamba phambili emakethe:
I-M720 Triathlon manje isibiza ama-euro angu-38,99 kuphela, isaphulelo esimangalisayo esingu-46%, lokhu kube yigundane lami iminyaka engaphezu kwemithathu> LINK
I-MX Master, igundane eliphezulu kakhulu lama-euro angama-49,90 kuphela, okuyisaphulelo esingaqondakali cishe esingu-50%> LINK
Amaphakethe wezindaba zeTrust:
Igundane le-OZAA elinesaphulelo esingu-30% lihlala kuma-euro angu-34,99 kuphela ku-
Isipikha seTrust Titan sisethelwe ama-euro angu-32,99 kuphela> LINK
I-Trust Ziva, ikhibhodi negundane le-combo kusuka kuma-euro ayi-16,26> LINK
Lokhu kwenzelwa manje ukunikezwa kwethu nezincomo zanamuhla ku-Black Friday, siyethemba ukuthi ungazisebenzisa.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izipesheli ezinhle kakhulu zakuqala ngoLwesihlanu oMnyama
Amadili amahle kakhulu ngempelasonto yangoLwesihlanu oMnyama